Trade Archives - The Source
4 weeks ago by adminTrade
HARARE, November 29 (The Source) – China’s President Xi Jinping is willing to work together with Zimbabwe’s new leader, Emmerson Mnangagwa, an envoy said on Wednesday, giving hope to the possible revival of ‘mega deals’ signed between the two countries two years ago.
3 months ago by adminMining
HARARE, October 24 (The Source) – The Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) says mineral export volumes for the period January to September 2017 have improved ‘significantly’ compared to same period in 2016 largely driven by increased chrome exports.
4 months ago by AlfonceData
BULAWAYO, September 27 (The Source) — Zimbabwe’s trade deficit narrowed by 27 percent to $1,3 billion in the first eight months of the year, after exports increased by 48 percent, latest trade data from the statistics agency shows. Between January and August, imports amounted to… Read More
Zim exports to Iran collapse to $1,000, envoy blames banking troubles
HARARE, September 20 (The Source) – A visiting Parliamentary delegation from Iran on Wednesday expressed concern over the extremely low trade volumes between Zimbabwe and Iran. Chairman of the Iran-Zimbabwe Parliamentary Friendship Group, Mostafa Kavakebian who is also a member of the Iranian Parliamentary Portfolio… Read More
Zim shelves Botswana pipeline sharing deal
By Adel Moyo, HARARE, September 19 (The Source) – Zimbabwe has effectively shelved plans to extend its Feruka pipeline to Francistown, Botswana citing viability concerns over the project, an official has said.
Zimbabwe’s trade deficit narrows to $1,2 bln in 7 months -Zimstats
5 months ago by AlfonceTrade
BULAWAYO, August 28 (The Source) — Zimbabwe’s trade deficit narrowed by 21 percent to $1,2 billion in the first seven months of the year, latest trade data from the statistics agency shows. Figures from the Zimbabwe Statistics Agency (Zimstat) show that between January and July… Read More
Zim trade deficit at $1bln in 5 months
BULAWAYO, July 4 (The Source) — Zimbabwe’s trade deficit stood at $1,01 billion in the first five months of the year, a slight improvement from $1,12 billion last year, according to the latest data from the Zimbabwe National Statistics Agency (Zimstat). Imports stood at $2,14… Read More
7 months ago by adminTrade
April inflation edges up to 0.48 pct
HARARE, May 15 (The Source)- Zimbabwe’s year on year inflation rate for the month of April gained 0.27 percentage points to 0.48 percent, the statistics agency reported on Monday. Month on month the inflation rate was up 0.02 percentage points on the March 2017… Read More
By Ruth Ngwenya, HARARE, March 28 (The Source) – The Zimbabwe International Trade Fair Company (ZITF) on Tuesday set out an ambitious plan to build a 300-bed hotel and convention centre at its Bulawayo grounds over three years. Chairperson Ruth Ncube told a meeting in… Read More
Zimbabwe’s trade deficit at $310mln in two months
BULAWAYO, March 22 (The Source) – Zimbabwe’s trade deficit stood at $309,7 million in the first two months of 2017 after exports fell 7 percent as the country continues to rely on imported products, latest trade data from the Zimbabwe National Statistics Agency (Zimstat) shows.… Read More